Tag: safiirada astaanta | Martech Zone
Tag: safiirada sumadaha
Aspire: Platform Suuqgeynta Saamaynta ee Kobaca Sare ee Shopify Brands
Arbacada, December 29, 2021 Arbacada, December 29, 2021 Douglas Karr
Hadii aad tahay akhriste aad u jecel Martech Zone, waad ogtahay in aan dareemo isku dhafan ka haysto suuqgeynta saameeyayaasha. Aragtidayda suuq-geyntu maaha in aanay shaqayn… waa in ay u baahan tahay in la fuliyo oo si wanaagsan loola socdo. Waxaa jira dhowr sababood oo ay: Dhaqanka Iibka - Saamaynayaashu waxa laga yaabaa inay dhisaan wacyiga sumadda, laakiin maaha inay ku qanciyaan booqdaha inuu dhab ahaantii wax iibsado. Taasi waa dhibaato adag… halkaas oo laga yaabo inaan saameynaha si sax ah loo magdhabin
Talaado, July 28, 2020 Talaado, July 28, 2020 Douglas Karr
Markaad ordeyso tartan ama wax bixin, foomamka gelitaanka waxay cabsi gelin karaan kaqeybgalayaasha imaan kara. Tartan ishtag ah ayaa meesha ka saaraya caqabadahaas soo gelitaanka. Ka qaybgalayaashaadu waxay u baahan yihiin oo keliya inay isticmaalaan hashtag-gaaga, galitaankoodana waxaa lagu soo ururin doonaa muuqaal indho-qabad leh. Tartanka hashtag ee ShortStack ayaa kuu oggolaanaya inaad ka soo ururiso ishtag gelinta Instagram iyo Twitter adigoo xoojinaya la macaamilka taageerayaasha. Ururi Macluumaadka Abuurista Isticmaalaha iyo Qorista Safiirada Sumadda Tartanka hashtag waa habka ugu fudud ee lagu soo ururiyo waxyaabaha ka kooban isticmaale-curiyaha
5 Tilmaamood oo ku saabsan sida looga faa'iideysto Dib u eegista Macaamiisha Bulshada
Axad, Sebtembar 9, 2018 Axad, Sebtembar 9, 2018 Olivia Ryan
Suuqa waa khibrad adag, kaliya maahan magacyada waaweyn laakiin sidoo kale celceliska. Haddii aad leedahay ganacsi weyn, dukaan yar oo maxalli ah, ama goob internet ah, fursadahaaga aad ku fuuli karto jaranjarada aad bay u yartahay ilaa aad si wanaagsan u daryeesho macaamiishaada. Markaad ku mashquulsan tahay rajadaada 'iyo farxadda macaamiisha, si dhakhso leh ayey uga jawaabi doonaan. Waxay ku siin doonaan faa'iidooyin aad u badan kuwaas oo inta badan ka kooban aaminaad, dib u eegista macaamiisha, iyo
Garaaca Wadnaha: Gaaro in kabadan 150,000 Macaamiil Macaamiil Milyanle ah
Jimce, Maarso 2, 2018 Axad, Maarso 4, 2018 Douglas Karr
Astaamaha maanta waxay ku qarashgareyaan $ 36 bilyan kanaallada bulshada si ay ula macaamilaan una soo iibsadaan macaamiisha cusub ee kun jirka ah iyagoo adeegsanaya ololeyaal u eg nooca 'Influencer' oo wata magacyo caan ah. Si kastaba ha noqotee; kaqeybgalka iyo isbadalku waa hooseeyaan maxaa yeelay haweenka kun jirka ah waxay aaminaan oo ay waxbadan kaqeyb galaan talooyinka asxaabta gaar ahaan markay kala dooranayaan hal shey ama adeeg iyo mid kale. Garaaca wadnaha waa barxad loogu tala galay dumarka kun-sano jirka ah si loogu dhiirrigeliyo noocyada ka dhex jira xisaabaadkooda bulshada iyo bulshooyinka. Wadnaha garaaca ayaa dhowaan sii daayay Discover Feed, isaga oo siinaya qaab aan xuduud lahayn
Suuqgeynta Saameynta: Taariikhda, Evolution, iyo Mustaqbalka
Khamiis, Agoosto 10, 2017 Isniin, Janaayo 18, 2021 brian wallace
Saameeyayaasha warbaahinta bulshada: taasi waa wax dhab ah? Maaddaama baraha bulshada ay noqdeen habka la doorbido ee loogu talagalay xiriirinta dad badan dib 2004, inbadan oo naga mid ah ma qiyaasi karaan nolosheena la'aanteed. Mid ka mid ah waxyaabaha ay baraha bulshada si hufan ugu beddeleen wanaag ayaa ah inay dimoqraadiyeysay cidda caan ku noqonaysa, ama ugu yaraan si fiican loo yaqaan. Ilaa dhowaanahan, waa inaan ku tiirsanaannaa filimada, majaladaha, iyo barnaamijyada telefishanka si aad noogu sheegto cidda caanka ahayd.